म्यानमारको सैनिक ‘कू’, विगत र भविष्य : सेनाको यो कदम केका लागि ? - kageshworikhabar.com
म्यानमारको सैनिक ‘कू’, विगत र भविष्य : सेनाको यो कदम केका लागि ?
२१ माघ, काठमाडौं । म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको वागडोल सम्हाल्न नदिई सोमबार एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ । यहाँका निर्वाचित नेताहरू आङ सान सुकी, राष्ट्रपतिलगायतका दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको छ । सेनाको यो कदम केका लागि ? के निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालनमा नागरिक सन्तुष्ट थिएनन् कि यो सैनिक शासकहरूको महत्वाकांक्षाका कारण निम्तिएको परिणाम हो ? विश्व समुदायले यसलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिरहेको छ ।
रिचर्डसनद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म्यानमारको वास्तविक नेताको रूपमा सुकीले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बढाउन असफल भएकोले उनीले पछि हट्नुपर्दछ र म्यानमारका अन्य प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगका साथ अघि सार्नुपर्छ ।”
Previous articleकोरोनाले फिलिपिन्सको पर्यटन क्षेत्रमा ८ अर्ब डलर राजश्व गुम्यो
Next articleनाभाल्नीको समर्थनमा विरोघ प्रदर्शन गर्ने १४ सय जना पक्राउ